OpenPrinting wuxuu ku shaqeeyaa fargeeto ah nidaamka daabacaada CUPS | Laga soo bilaabo Linux
OpenPrinting wuxuu ku shaqeeyaa fargeeto nidaamka daabacaada CUPS
Mashruuca OpenPrinting (oo ay taageerto Linux Foundation), ogeysiiyey in horumariyayaasheedas waxay ku bilaabeen fargeeto nidaamka daabacaada CUPS, halkaas oo qaybta ugu firfircoon ee horumarka ay tahay Michael R Sweet, oo ah qoraha asalka ah ee CUPS.
Tan iyo ilaa 2007, kadib iibsiga alaabada softiweerka fudud, (shirkada CUPS) Apple waxay si buuxda gacanta ugu dhigtay horumarinta CUPS. Bishii Diseembar 2019, Michael Sweet, aasaasihii mashruuca CUPS iyo alaabada Software-ka fudud, ayaa iska casilay Apple.
Isbeddelada ugu badan saldhigga Koodhadhka CUPS waxaa sameeyay shaqsi Michael Sweet, laakiin markii uu ku dhawaaqayay bixitaankiisa, Michael wuxuu xusay in laba injineer ay ku sii nagaadeen Apple kuwaas oo bixin doona dayactirka CUPS.
Si kastaba ha ahaatee, cayrintii Michael kadib, mashruuca CUPS wuxuu joojiyay horumarintiisa waana in inta lagu jiro 2020, kaliya ballanqaad lagu daray saldhigga koodhadhka CUPS iyadoo meesha laga saarayo nuglaanta.
Ururkii foosha xumaa ee OpenPrinting waxaa la sameeyay 2006 ku biirista mashruuca Linuxprinting.org iyo OpenPrinting group ka shaqeeya ee Free Software Group, oo dhisayay qaab dhismeedka nidaamka daabacaadda Linux (Michael Sweet wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaasha kooxdan).
Sannad kadib, mashruucu wuxuu hoos yimid garabka Linux Foundation ilaa mashruucii wuxuu ka shaqeeyaa horumarinta naqshadaha daabacaadda cusub, teknoolojiyada, kaabayaasha daabacaadda iyo heerarka isku xirnaanta ee Linux iyo nidaamyada hawlgalka ee UNIX.
Marka lagu daro sidoo kale la shaqeynta IEEE-ISTO Printer Working Group (PWG) mashaariicda IPP, wuxuu la shaqeeyaa SANE si uu u sameeyo baaritaanka IPP mid dhab ah.
Waxay haysaa koobabka-miirayaasha taas oo u oggolaaneysa CUPS in loo isticmaalo nidaam kasta oo ku saleysan Unix (ma aha macOS), iyos masuul ka ah keydka keydka xogta iyo waxaad ka shaqeyneysaa mashruuca daabacaadda daabacaadda daabacaadda ee 'Common Print Dialog Backends'.
Sanadkii 2012, mashruuca OpenPrinting, sida laga soo xigtay Apple, waxay daryeeshay xirmada koobabka miirayaasha leh qaybaha lagama maarmaanka u ah CUPS si ay uga shaqeeyaan nidaamyo aan ka ahayn macOS (sida ku jirta sii deynta CUPS 1.6, Apple waxay joojisay taageerada qaar ka mid ah miirayaasha daabacaadda iyo gadaal u adeegsiga Linux, laakiin dan kama lihi macOS, waxayna sidoo kale duleeyeen darawalada PPD iyaga oo ka doorbiday borotokoolka IPP meel kasta).
Waqtigan xaadirka ah, keydka foorjirka ah waxaa ku jira balastarro ay ku urureen qaybo kala duwan oo Linux ah iyo nidaamyada BSD.
Laanta waa la wada shaqeyn doonaa, taasi waa in la yiraahdo keydka ugu weyn Apple CUPS u noqon doonaa aasaas ahaan, iyo noocyada 'OpenPrinting CUPS' waxaa loo samayn doonaa sidii dhammaystir ahaanTusaale ahaan, iyada oo ku saleysan nooca 2.3.3, waxaa la qorsheeyay in la sameeyo nooc 2.3.3OP1.
Kadib baaritaan balaaran, isbeddelada lagu sameeyay fargeetada ayaa la qorsheynayaa in lagu soo celiyo saldhigga weyn ee CUPS, adoo u diraya codsiyada jiidista Apple.
Till Kampeter, oo ah hogaamiyaha mashruuca OpenPrinting, ayaa faallo ka bixiyay joojinta daabacaadaha CUPS, isagoo xusay in haddii Apple ay joojiso ka qayb qaadashada mashruucan, isaga, iyo Michael Sweet, ay horumarin ku sameyn doonaan gacmahooda, maadaama CUPS ay muhiim u tahay nidaamka deegaanka ee Linux. . Intaa waxaa sii dheer, wuxuu sheegay ujeedka ah in si dhakhso leh loo joojiyo taageerada CUPS ee qaabka sharaxaadda daabacaadda PPD, taas oo hoos u dhacday.
CUPS wali waxaa looga baahan doonaa Linux. Shaqooyinka safka CUPS shaqooyinka (maahan dhamaan codsiyada daabacayaasha ama daabacadaha IPP-ga ah ee sameeya), horay ayey usii shaandheeyaan PDF-ka barnaamijyada isticmaalaha qaab daabacan (ama arjiga daabacaha) fahmayo (IPP uma baahna daabacaad / server IPP inuu fahmo PDF) oo wadaaga daabacayaasha shabakadda, sidoo kale nidaamyo aqoonsi oo casri ah sida Kerberos.
CUPS waxay joojineysaa taageerida faylasha PPD dhaqsi (tani waa mid kamid ah isbadalada Roadmap-ka waaweyn) marka darawalada caadiga ah ee ka kooban PPDs iyo miirayaasha lama sii taageeri doono codsiyada daabacadu waa wadada kaliya ee lagu bixiyo daabacadaha darawallada
Fiiri Linux Plumber Microconferences, shirarka OpenPrinting Summit / PWG (eeg bogga OpenPrinting, "Wararka iyo Dhacdooyinka"), iyo qoraaladeyda wararka ee OpenPrinting.
Finalmente hadaad xiisaynayso inaad waxbadan ka ogaato ku saabsan mashruuca, waad ka eegi kartaa faahfaahinta adigoo tagaya xiriiriyaha soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » OpenPrinting wuxuu ku shaqeeyaa fargeeto nidaamka daabacaada CUPS
Tor Browser 10: Nooc cusub oo lagu sii daayay horumarin xiiso leh